सुदूरपश्चिममा पुनः हिमपात शुरु, जनजीवन प्रभावित – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सुदूरपश्चिममा पुनः हिमपात शुरु, जनजीवन प्रभावित
अधिकांश विद्यालयमा तेस्रो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । वर्षा र हिमपातका कारण विद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका परीक्षासमेत प्रभावित हुने मालिका नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुभराज पाध्याले बताउनु्भयो । चिसोले विद्यार्थीलाई समस्या हुने भएकाले परीक्षा नै स्थगित गर्नुपर्ने हुनसक्ने प्रधानाध्यापक पाध्यायको भनाइ थियो ।
आजपनि बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको विनिमयदर कति ?
कोरोनाको त्रास बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि अन्य देशमा जसरी समस्या झनै बल्झियो, के पुनः लकडाउन होला ?
कालापानी क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न गएको टोलीलाई भारतले रोक्याे : मन्त्री अर्याल